Dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose
Beegsonews-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo Al-Shabaab iyo Ciidanka Dowladda ku dhexmaray Deegaan katirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Xoogag katirsan Al-Shabaab ay wadada u galeen Koloyo ay wateen Ciidamada sida gaarka ah u tababaran we Baangaraafta,kuwaas oo marayay Deegaanka Al yasir oo kaabiga ku haya Garoonka Number 50 ee katirsan Gobolka shabeellaha Hoose.
Warar lagu qoray baraha tageera Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Xubno katirsan Al-Shabaab ay wadada u galeen kolonyo ay la socdeen Ciidamo Baangaraafta, Isla markaana lagu gubay Gaari Cabdi bila ah,balse ma jirto cid madax banaan oo Xaqiijin karta arrintaasi.
Saraakiisha Ciidamada Baangaraafta wali dhankooda kama aysan hadlin, dagaalka ay la galeen Al-Shabaab iyo khasaaraha ka soo gaaray Dagaalka.
Sikastaba ha ahaate ma ahan markii ugu horeeysay oo Al-Shabaab iyo Ciidanka Dowladda ay ku dagaalamaaan Degaano katirsan Gobolka shabeellaha Hoose.
Previous articleImaaraatka iyo Sacuudiga oo cambaareeyey Go’aanka Qatar
Next articleSaudi arabia oo ku dhawaaqey maalinta Ciida Fitriga
Somaliland oo ka soo horjeesatay shir wasiirrada arrimaha Dibadda waddamada Kulaala...